2 Trillion Oo Doollar Oo Uu Maraykanku Ku Waayay Dagaalka Afqaanistaan [Warbixin].
6 katirsan ciidamada AMISOM oo lagu dilay deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo soo magacaabay xubnaha umetelaya guddiga doorashooyinka.
R/wasaaraha Itoobiya oo beeniyay in uu xanuunsanyahay.
Warar sheegaya in walxa sumeysan lagu weeraray xafiiska madaxweynaha Tuunis.
Dad ka badan 100,000 qof British ah oo udhintay Cudurka Carona Virus.
Faah Faahin: Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay deegaanka Gololeey ee Sh/dhexe iyo qarax ka dhacay Hodon.
Wednesday March 04, 2020 - 10:04:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Machad ka faallooda arimaha dagaallada oo laga leeyahay wadanka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday qarashka Maraykanka uga baxay duulaanka 19 sano jirsaday ee uu 2001-dii wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan.
Machadkan oo ay si wadajir ah u aas-aaseen jamaacada Barawn iyo Boston ee ku yaala wadanak Maraykanka ayaa qiimeyn sanado badan qaadatay kadib, wuxuu daaha ka rogay in Maraykanku uu lacago xad dhaaf ah ku bixiyay duulaanka uu ku qaaday wadanka Afqaanistaan.
Tan iyo 2001-dii illaa iyo 2020-ka, wuxuu Maraykanka ku qarash gareeyey dagaalka Afqaanistaan lacag ka badan 2 Trillion oo dollar, sida uu sheegayo machadka Costs of War ee fadhigiisu yahay wadanka Maraykanka.
Si guud dhaqaalaha Maraykanka uga baxay dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah Muslimiinta, uuna ka hurinayo wadamo dhowr ah oo katirsan caalamka Islaamka, waxay gaaraysaa 6.4 Trillion oo dollar, sida uu sheegayo machadka.
Warbixin dhawaan uu baahiyay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in dagaalka Afqaanistaan uu Maraykanka ku bixiyay lacag gaareysa inkabadan labo trillion oo dollar, waana tirada uu hadda shaaciyay machadka Costs of War ee ka faallooda arimaha dagaallada.
Washington Post waxay intaa ku dartay in dagaalka Afqaanistaan lagu dilay 6300 oo askari oo Maraykan ah, waxayna dad badani aaminsanyihiin in tirada ciidamada Maraykanka looga dilay Afqaanistaan ay aad uga badantahay intaas.
Marka laga hadlo tirada guud ee ciidamada Maraykanka, kana qeybgalay dagaalka Afqaanistaan waxay gaarayaan lix boqol oo kun oo askari, kuwaas oo 18-kii sano ee lasoo dhaafay isku bed bedelayay wadankaas, waxaana hadda Afqaanistaan ka jooga 12 kun oo askari.
Xukuumadihii is xig xigay ee Maraykanka soo maray ayaa aad uga gaabsanaya ka hadalka dhaqaalaha Maraykanka uga baxay duulaanka Afqaanistaan iyo tirada ciidamada uu ku waayay dagaalkaas, waxaase Maraykanku Afqaanistaan u arkaa inuu yahay mid uu ku khasaaray oo ay tahay in si deg deg ah loo soo afjaro.
Dhawaan ayaa maamulka Trump wuxuu si cad u sheegay in afar iyo toban bilood gudahood uu guud ahaa ciidamadiisa kala soo bixi doono wadanka Afqaanistaan, ayna reer Afqaanistaan dhisanayaan maamulka ay doonaan.
Haddii ka bixitaanka Maraykanka ee Afqaanistaan uu dhab noqdo, waxay ka dhigantahay in imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ay la wareegto inta uga dhiman Afqaanistaan oo la eg 20%, maadaama ay hadda si buuxda u maamusho cel celis ahaan 80% masaaxada guud ee dalka Afqaanistaan.
Siyaasiyiinta Maraykanka iyo warbaahintooda ayaa sheegaya in Maraykanka uu kasoo baxayo Afqaanistaan isagoo jabay, kuna khasaaray dhaqaalihii iyo ciidankii uu u huray dagaalka Afqaanistaan ee labaatanka sano ku dhow, maadaama aanu xaqiijin hadafkii uu lahaa oo ahaa inuu kha takhaluso imaarada islaamiga ee Afqaanistaan, dalkana ka hirgeliyo dowlad isagu gacanta ku hayo, oo Dimuqraadiyad iyo wax lamid ah dalka ku hagta.
Xigasho: Radio Al Furqaan
Weeraro Askar iyo Saraakiil lagu dilay oo ka dhacay Diinsoor iyo Ceelbarde [Warbixin].
Ciidamada Itoobiya oo Shacab ku xasuuqay gobolka Tigray [Warbixin].
Dagaal lagu gubay 9 gaari oo ka dhacay duleedka degmada Ceelbarde [Warbixin].
Dowladda Ereteriya oo ay ku caddaatay in ciidamadeedu ay ka qeyb galeen dagaalka ka socda Itoobiya.
Sawirro: Sidaan ayaa ciidamada dowladda loogu xasuuqay duleedka Bacaadweyn.
25/01/2021 - 17:22:49